ကယ်လီဖိုးနီးယားဧရိယာ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်တစ်ဦးတတ်နိုင်ဇိမ်ခံပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်း. လေကြောင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းငှားရမ်းရန်အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပေါ်အောက်ကနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အခမဲ့ကိုးကား Get. ကယ်လီဖိုးနီးယားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်စီးပွားရေးအဘို့အခရီးသွားများအတွက်သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာပိုမိုပျံသန်းစေခြင်းငှါ mishandled ကြောင်းကြောင့်လုပ်ရတဲ့ရဲ့ setting ကိုမှရှေးခယျြမှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်လာနှင့် overbooked င်. မမျှသာ, La အတွက်စာအုပ်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပီတိခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းပေးပါဘူး, ဖြည့်စွက်ကာ, ဒါကြောင့်သင် Los Angeles မြို့ကမ်းလှမ်းသည်အရာခပ်သိမ်းကြုံတွေ့ရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း - ဟောလိဝုဒ်၏သောအရပ်နှင့်ဆွဲဆောင်, အံ့ဖွယ်ကမ်းခြေ, စမ်းသပ်ဖို့ဟင်းလျာ၏ကြည်နူးဖွယ်ခင်းကျင်း. သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်အချိန်တိုးတက်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပင်သင့်ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နိုင်အောင်ပဋိညဉ်စာတမ်းပျံသန်းပျံသန်းသည့်လေယာဉ်တင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်. နောက်ဆုံးတော့, အဘယ်အရာကိုမျှအကြံပြု "အလုပ်အကိုင်" ဘေးဖယ်အစဉ်မပြတ်တိရောက်ရှိလာမှ.
Los Angeles မြို့ကနေသို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း, , CA 323-886-0300
ဖို့ကိုနှိပ်ပါ https://www.wysluxury.com/private-jet-charter-from-or-to-los-angeles-ca/ သငျသညျအနီးပိုပြီးတည်နေရာအတွက်.
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, နီဗားဒါး, နယူးယောက်, ဂျော်ဂျီယာ, အီလီနွိုက်, ကော်လိုရာဒို